စရှိနောက်နောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စရှိနောက်နောင်
Posted by ေမာင္ ေပ on Jun 20, 2012 in Creative Writing, Think Different | 58 comments
ေဂဇက္သေဘာထား သိခ်င္လို ့ပါ
မြန်မာစကားမှာ လူတွေပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခုရှိပါတယ်….
“ စရှိနောက်နောင် ” … တဲ့
စ = အစ
ရှိ = ရှိသည်
နောက်နောင် = နောက်ပိုင်းအချိန် ၊ နောင်အခါ
အဲ့လို မီးနင်းပြန်ကြည့်ရအောင် ။
ဥမပါ အနေနဲ ့ဆိုရင်
မန်းဂေဇက် ပိုင်ရှင်သဂျီး အူးကိုင် ကို ပြရမှာဘဲ.. စာလုံးပေါင်းမှားသွားတယ်ဗျာ ၊ ဥပမာ လို ့ပြင်ဖတ်ပေးကြပါနော…
စ = လက်ရှိရခိုင်အရေးအခင်းနဲ ့ပတ်သက်ပြီး မငြိမ်သက်သေးတဲ့အချိန်မှာ ၊ ပိုပြီးပွဲဆူနိုင်မယ့် ပို ့စ်မျိုးကို အောင်လ တို ့အေးဝတီကြီးတို ့ကို ပေးတင်တယ်
ရှိ = အဆဲကွန်မင့်တွေ ၊ မြန်မာတွေကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုပါ စော်ကားလာတဲ့ ကွန်မင့်မျိုးတွေ ပါလာပေမယ့် မဖျက်ဘဲပစ်ထားတော့ ၊ ရှိနေတုန်း
နောက်နောင် = ဆိုက်ပိုင်ရှင်ကတောင် မစီစစ်ဘူး ၊ ခွင့်ပြုတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတော့ ၊ စာလာဖတ်ကြတဲ့ မြန်မာအားလုံး နဲ ့မြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာတွေကို ပိုးစိုးပက်စက်စော်ကားထားတဲ့ ပို ့စ်တွေ ထပ်တင်လာတယ် ။
“စရှိနောက်နောင်” အဲဒါပြီးတော့ ၊ ဂေဇက်ကို စာဖတ်ချင်လို ့လာတဲ့လူတွေလဲ စိတ်ညစ် ဒေါသဖြစ်ရ ၊ စာရေးဖို ့လာတဲ့လူတွေမှာလဲ စိတ်ညစ်ပြီး စာရေးချင်စိတ်ပျောက် ။
ကျုပ်ကတော့ အဲ့ပို ့စ်တွေကို ဘာများပါလိမ့်ဆိုပြီး ဝင်ဝင်ဖတ်ဖြစ်တယ် ။ ပြီးရင်ဒေါသဖြစ်ရရော ၊ ကျုပ်ဂေဇက်ကို စာရေးဖို ့လာခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ရေးချင်စိတ်ပျောက်ရတယ် ။ ဒါဟာ သက်သက်မဲ့ သွေးဆူအောင် ၊ ဂေဇက်ဆိုက်ထဲမှာတင် မက အပြင်မှာပါ ပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင် သွေးထိုးနေတဲ့ ပို ့စ်တွေပါဘဲ ။
ဆိုတော့ဗျာ… ဂေဇက်က ခင်မင်လေးစားရတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ကို တစ်ခု မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဗျာ ။
အဲဒီလိုပို ့စ်တွေဆိုရင် ဖတ်ရုံဘဲ ဖတ်ကြပါ ။ ကွန်မင့်မပေးကြပါနဲ ့လို ့.. လေးစားစွာဖြင့် ပြောခွင့်ပြုပါနော ။
ဟိုးတုန်းက မန်းဂေဇက်မှာ ကွန်မင့်မရှိတဲ့ ပို ့စ်ဆိုရင် အော်တို ဖျက်မယ်လို ့သိခဲ့ရဘူးတယ် ။ ဘာကွန်မင့်မှ မပေးဘဲနေလိုက်ရင် ပျက်သွားမယ် ထင်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး ကွန်မင့်မရှိတဲ့ ပို ့စ် ဆိုရင် ၊ စာဖတ်သူကလဲ စိတ်ဝင်စားမှု နဲပါတယ် ။
(အမှန်က ဒီလို အရမ်းတိုလွန်းတဲ့ စာမျိုးက ဖိုရမ်မှာဘဲ တင်သင့်တာပါ ၊ ဂေဇက်ဝင်တွေရဲ ့သဘောထားကို သိချင်မိလို ့ပို ့စ်အဖြစ်တင်လိုက်တာကို နားလည်ပေးတော်မူကြပါခင်ဗျား)
……. အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် …….
ကျနော်ကတော့ ဒီလိုစနစ်နဲ့နေခဲ့တာ ကြာ ကြာပေါ့ မောင်ပေရယ်၊
အမှန်တကယ်ကြီး ကို တကယ်အဟုတ် မှန်ကြောင်း အမှန်တကယ် နဲ့ အဟုတ်အမှန် ကြီးကို ထောက်ခံပါတယ်။
ရော့ ၂ကျပ်၊ ပေး တစ်ဆယ်။
ဒါထက် ဘိုလိုဖစ်ပြီး မင်းက သန်းခေါင်ကျော်တောင် မအိပ်သေးတာလဲ။
ဒီနေ့ ဘောပွဲ လဲ မရှိ။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အကျွန်ုပ်လဲ အတော်ချဉ်နေသည်မှာ ကြာပေ၏၊ ယခုဆြာပေမှ ယင်းသို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလာသဖြင့် ကျွန်ုပ်နှင့် လွန်စွာ စိ်တ်သဘောထားခြင်း တိုက်ဆိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆြာပေအား သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂ ီဘွဲ့နှင့်အတူ ၂ကျပ်ပါ ထပ်ဆင့်ချီးမြှင့်လိုက်၏….(မူးမူးနဲ့ဝင်ဖတ်ပီး လျှောက်ပြောမိတာ ဆောရီး)
သတိုးပျံချီ ဖော်လံဖားစည် လူမူးထူးချွန်(ပထမဆင့်)
ကိုးနတ်ရှင် မျက်လှည့်ပြလိုက်ပြီ.. မောင်ပေ ပိုစ်ကို မန်းတာ အပေါ်တက်သွားတယ်။ နေရာလွဲသွားပြီ။
အုပေရေ့ ညာညာလေးက လက်ခံတယ်တဲ့ အဟီးးး
တရုတ်သူလျှို ကြေးမုံဂျီးဂိုရောဗဲလား…။ ချကွာ….ဖမ်းချုပ်ပီးငါ့ဆီပို့..။ :mad: